Siilaanyo oo magacaabay ergayga maamulkiisa u qaabilsan wada-hadalka DF - Caasimada Online
Home Warar Siilaanyo oo magacaabay ergayga maamulkiisa u qaabilsan wada-hadalka DF
Siilaanyo oo magacaabay ergayga maamulkiisa u qaabilsan wada-hadalka DF
Hargeysa (Caasimada Online) – Hogaamiyaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa wareegto ku magacaabay Ergayga maamulkiisa u qaabilsan wadahadalka dowlada Federaalka kala dhexeeya maamulka Somaliland.
Wareegtada kasoo baxday Xafiiska Hogaamiyaha maamulka ayaa waxaa lagu maacaabay Marwo Adno Aadan Ismaaciil oo noqon doonta Ergeyga Gaarka ah ee maamulka Somaliland u qaabilsan Waddahadalada DFS iyo maamulka Somaliland.
Ergayga cusub Marwo Adna Aadan Ismaaciil ayaa horay u soo noqotay Wasiirka Arrimaha dibadda maamulka Somaliland waxaana la sheegay in ay tahay qof ay ku weyn tahay qadiyadda Somaliland.
Markuu Tixgeliyey: Baahida loo qabo mas’uul aqoon u leh xidhiidhka Jimciyadda Quruumaha Ka-dhaxaysa
Markuu Arkay: Qoraalka soo jeedinta ah ee Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah;
Markuu Ku Qancay: In ay leedahay waaya-aragnimada, aqoonta iyo kartida looga baahan yahay mas’uulka xilkan gudan kara;